Shirqoolkii nacasyada: yaa qoray, waxa ku saabsan iyo xiisaha | Suugaanta hadda jirta
Isku dhafka ceciuos
Weligaa ma akhrisay Isku dhafka ceciuos? Ma ogtahay waxa ku saabsan? Waxaa laga yaabaa inay tahay xilligii aad aqrinaysay sheeko aad ku miisaameyso sida dadku u noolaan jireen iyo sida hadda loo sameeyo, sheeko kooban oo ka kooban naqdinta bulshada ee qoraaga oo waliba dareemay inuusan ku filneyn.
Marka waxaan kugu jiidaneynaa dabcan adiga oo aan kuu sheegin dhamaadka, wax kasta oo aad ka heli doonto buuggan.
1 Yaa qoray shirqoolka nacasyada
2 Muxuu yahay shirqoolka nacasyadu
2.1 Dulucda buugga
3 Qaab noocee ah iyo qaab dhismeed uu leeyahay
Yaa qoray shirqoolka nacasyada
Qoraaga cidda aan ku leenahay Shirqoolka nacasyadu waa John Kennedy Toole. Wuxuu ku dhashay magaalada New Orleans sanadkii 1937 wuxuuna dhintey 31 sano kadib, 1969. Buugiisa lama daabicin intuu noolaa, laakiin waxaa la daabacay si heer sare ah (1980) wuxuuna helay abaalmarinta Pulitzer ee khayaaliga sanadkii 1981.
John wuxuu ahaa wiilkii John iyo Thelma Toole, waalidiin aad u ilaaliya wiilkooda, gaar ahaan hooyadiis, oo aan awoodin inay u ogolaato inuu la ciyaaro caruur kale. Taasi waxay ka dhigtay inuu u jeesto waxbarashadiisa oo wuxuu ahaa arday ku dayasho mudan. Wuxuu ka qalin jabiyay jaamacada Tulane University wuxuuna dhameeyay BA oo ah luuqada Ingriiska ee Columbia. Intaas ka dib, wuxuu bilaabay inuu kaaliye ka noqdo borofisar Ingiriisiga Jaamacadda Southwest Louisiana muddo hal sano ah.
Halkaas ayuu uga tegey New York, si uu uga qabto booska macallinimo ee Hunter College.
Si kastaba ha noqotee, ma uusan lumin xirfaddiisa tababarka, maadaama uu isku dayay inuu helo dhakhtar. Si kastaba ha noqotee, inuu aado ciidanka, halkaas oo uu laba sano ku qaatay barashada Ingiriisiga kuwa ku soo qorta Isbaanishka, ayaa ka dhigtay inuu is dhiibo.
Markuu dagaalka ka soo noqday, wuxuu degay New Orleans halkaas oo uu kula noolaa waalidkiis wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo Dominican College. Si kastaba ha noqotee, wuxuu sidoo kale caawiyay saaxiibbadiis (tusaale ahaan iibinta tamales) ama, ka dib markii uu ka qalin jabiyay sharaf jaamacadda Tulane, kana shaqeynayay warshad dharka ragga.
Waxaas oo dhan wuxuu ku qabtay buugiisa, Shirqoolkii nacasyada, markuu dhammeeyayna wuxuu u diray guriga madbacadda ee Simon & Schuster. Laakiin tan waa la diiday maxaa yeelay "runti waxba kama ahayn." Kadib Toole wuxuu bilaabay inuu niyad jabo. Wuxuu qaatay khamri, wuu joojiyay shaqada wuxuuna ku dhammaaday ismiidaamin 31 jir ah.
Fue hooyadiis oo markaa u dagaallantay qof akhriya shaqada wiilkeeda. Iyo in qof uu ahaa Walker Percy oo, ka daalay adkeysiga, sameeyay, isagoo ku faraxsan buugga. Sidaa awgeed, Percy wuxuu ahaa horudhaca buugga. Guushaas awgeed, sheeko kale ayaa la badbaadiyey oo uu qoraagu qoray markii uu 16 jirka ahaa, oo uu u arkay inay xun tahay, The Neon Bible.
Muxuu yahay shirqoolka nacasyadu
Shirqoolka nacasyada waxaad ku kulmi doontaa a dabeecadda ugu weyn, Ignatius J. Reilly. Ninkani waa khaldan yahay oo waa khaldan yahay. Wuxuu jeclaan lahaa inuu ku noolaado qaab qarniyadii dhexe, qaababkiisa nololeed, akhlaaqdiisa, iwm. Sidaa darteed, adduunka oo dhan inuu maqlo, wuxuu go'aan ka gaarayaa inuu qoro boqollaal buug oo xusuus qor ah halkaas oo uu si xor ah ugu siinayo aragtidaas adduunka. Mid kasta oo ka mid ah buugaagta wax lagu qoro wuxuu qabsanayaa meel qolkiisa ka mid ah, si amar la’aan ah, in kasta oo uu leeyahay ujeedo adag oo uu ku dalbanayo. Maalin.
Isaga, shaqadu waa wax aad u xun, waa wax ay tahay in lagu rafaado maxaa yeelay adduunku waa hantiile iyo inuu u arko inuu yahay nooc addoonsi ah. Marka wuxuu ku egyahay isbarbardhiga Boethius (oo aqbalay dilkiisa) wuxuuna dejiyaa raadinta mid uu ku noolaado. Halkaasna, sheeko ayaa lagu miiqay, in kasta oo ay kaa qosli doonto wax badan, waxay sidoo kale ku tusi doontaa hab buunbuunin ah, sida bulshada maanta u eg tahay: oo leh danaysi, arxan darro, murugo ...
Marka la soo koobo, haa, waad ku qosli doontaa buugga, laakiin sidoo kale waxaad ka xumaan doontaa inaad aragto sida adduunku u noqday iyo sida tan ka hor sidan aysan ahayn, mana lagu xukumin mabaadi'da hadda u muuqata inaan dhammaanteen u wada raacnay si inaad «la qabsato» oo aad ka mid noqoto bulshada.
Waa kuwan soo koobitaankiisa:
The Conjuration Of Fools waa sheeko waalan, aashitoon iyo sheeko caqli badan. Laakiin intaas oo keliya maahan, sidoo kale waa mid si weyn u qosol badan oo qadhaadh isla wakhtigaas. Qosolku kaligiis wuu baxsaday kahor xaaladaha isku dheelitirka ee masiibadan weyn. Ignatius J. Runtii waxay u badan tahay inuu yahay mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee abid la abuuray oo dad badani aysan ka laba labeynin inay isbarbar dhigaan Don Quixote. Intaa waxaa sii dheer, isagu waa kahortagayaasha kaamil ah ee sheeko ay ka buuxaan astaamo aad u wanaagsan, oo lagu dejiyay magaalada dekedda leh ee New Orleans, oo ah saynisyahan Ignatius.
Isaga waa la fahmay, waa qof sodomeeyo soddon jir ah oo ku nool guriga hooyadiis una halgamaya inuu adduun wanaagsan ka gaadho qolkiisa gudihiisa. Laakiin si arxan daro ah ayaa loo jiidi doonaa si uu ugu wareego jidadka New Orleans isagoo raadinaya shaqo, lagu qasbay inuu soo galo bulshada, oo uu la leeyahay xiriir iska caabin ah, si uu u awoodo inuu kharashaadka hooyadiis ku bixisay shil gaari. Waxaan waday gaari sakhraansan. Qoraaga, John K. Toole, wuxuu helaa dib-u-eegis dabaqadda dhexe ah.
Waxay maamushaa inay ilaaliso xiisaha akhristaha (xitaa way ka sii weyn tahay akhriska labaad marka loo eego kii hore) oo leh jilayaal badan oo aan fiicnayn. Uma tagi doono boombalo madax leh, iyo Ignatius 'shakhsiyadiisa khiyaanada iyo khiyaanada leh, wuxuu siinayaa dib u eegis waqtigii uu ku noolaa cod jees jees ah oo ka duwan aragtida murugada leh ee nolosha jilayaasha la soo bandhigay Kaliya kama heli karno sheeko waalan oo dhib badan oo dhaliil bulsheed ah, laakiin dhagarta ayaa toos u socota bilowgeeda. Waqtigaas oo, sida halyeeyadeeda ay u tiri, Fortuna ay gadaal u rogayso giraangiradeeda oo waligeen ma ogaan karno waxa layaabka xun ee nasiibku noo hayo.
Halkan laga bilaabo, xaaladaha qaarkood waxay ku xirmaan kuwa kale, sida jilayaasha oo kale, waxaana la sameeyay baraf aad u weyn oo ku dambayn doona inuu qarxo dhamaadka sheekada. Ka dib markii uu dhammeeyay La Conjura De Los Focios, isaga oo 32 jir ah, qoraagu kuma guuleysan in uu daabaco. Tani waxay u horseeday niyad jab qoto dheer oo horseeday is-dilid. Adkaysiga iyo adkeysiga hooyadiis awgeed, maanta waxaan ku raaxeysan karnaa shaqadan macaan ee la siiyay Abaalmarinta Pulitzer. Waxaan sidoo kale ka heli karnaa The Neon Bible oo la daabacay, sheeko la qoray markii uu qoraagu jiray 16 sano.
Qaab noocee ah iyo qaab dhismeed uu leeyahay
Riwaayaddu waxay u qaybsan tahay cutubyo, kuwaas oo iyaguna u sii qaybsan qaybo-hoosaadyo. Dhamaantood Iyagu waxay ku jiraan qofka saddexaad oo yaabka leh ayaa qayb ka ah qoraalka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaybo aad awoodi doontid inaad ka aqriso qofka ugu horeeya, oo ah aragtida Ignatius. Kuwani waxay kaa caawinayaan fahamka dabeecadda iyo sheekada lafteeda. Kuwani waa qayb ka mid ah buugaagta xusuus qorka ah ee ay qorto, iyo sidoo kale waraaqaha ay la qorto saaxiibkeed, Myrna Minkoff, oo ay isku dhacaan aragtideeda adduunka, laakiin isla markaasna ay dareento inay dhammaystirtay.
Qaar badan baa qaba sheekada Shirqoolkii nacasyada waxay leedahay inbadan oo nolosha John Kennedy Toole, taas oo u timaadda inay ka tarjumto qaybo ka mid ah sheekadiisa, maahan oo keliya goobta dabeecadda, laakiin sidoo kale sababtoo ah shaqooyinka kala duwan ee uu qabto, ama xiriirka uu la leeyahay hooyadiis. Xitaa rabitaankaas maxaa yeelay waxa uu qoro waxay u adeegtaa in wax laga beddelo xaqiiqda ama adduunka.
Hadda oo aad wax yar ka sii fiicnaato Shirqoolka nacasyada, waxaad arki doontaa inay tahay sheeko aan waqti lahayn, oo lagu dabakhi karo bulshadan sidoo kale waqtiyadii hore ama mustaqbalka, iyo in dabeecadda qudhiisu kaa dhigayso inaad wajahdo aragtidiisa , ciil iyo arxan daro, aduunyada. Hadda, inuu saxsanaa iyo in kale waxay ku xirnaan doontaa fikirkaaga oo keliya. Ma aqrisay? Miyaad siin doontaa isku day?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Isku dhafka ceciuos
Yaa loo garaacayaa